Kudlisa iMercedes-Benz V-Class | Isolezwe
Kudlisa iMercedes-Benz V-Class
EZEZIMOTO / 16 August 2019, 11:56am / FANELESIBONGE BENGU
IMercedes-Benz V-Class entsha The new Mercedes-Benz V-Class – Exterior, Design and equipment line EXCLUSIVE, selenit grey metallic
EKUQALENI kwenyanga edlule ngesikhathi kuneVodacom Durban July abantu baseThekwini bazongivumela ukuthi imoto ebigcwele kakhulu yiMercedes-Benz V-Class.
Yonke indawo lapho uhamba khona, ikakhulukazi emgwaqweni wodumo uFlorida Road naseMhlanga ubuhlangana naleli bhasi lakwaMercedes.
Muva nje noFistaz Mixwell ubenomcimbi eMozambique lapho abantu bebehamba ngojenga lwamaV-Class.
Lokhu kukhombisa ukuthi yimoto esesitayeleni futhi eyintandokazi kubathengi. KwaMercedes abazikhiphi izibalo zokudayiswa kwezimoto zabo kuleli kodwa bathi emhlabeni jikelele kusuka iV-Class yethulwa ngo-2015, sekudyiswe angaphezulu kuka-209 000. U-2018 bathi ube muhle kakhulu ngoba badayise alinganiselwa ku-64 000.
Bafuna iqhubeke nokudayisa kahle esigabeni sayo samaMulti-Purpose Vehicle (MPV). Yingakho bethe ukuyithinta lapha nalapha izinto ezincane ukuze abathengi bezolokhu bebheke ngakuyo.
Bathe ukuyishintsha kubhampa ngaphambili kanjalo nakwi radiotor grille. Inhlobo ye-AMG line yona ine radior grille enophini be-chrome.
Ngaphandle kwalokhu baphinde benza amarimu amasha angu-17 inch no-inch futhi kukhona amanye angu-19 inch 10 spoke light-alloy.
Ngaphakathi bayifake ama-air vents amasha ngaphambili kodwa umehluko omkhulu ukuba khona kwezihlalo ezintsha ezimbili ngemuva. Lezi zihlalo ozifaka uma uthanda zikwazi ukulala nokukuwotawota emgwaqeni ukuze indlela ungayizwa.
Kuthiwa ingoma emnandi iyaphindwa nokuyinto abayenzile kwaMercedes ngokuthi izinjini bangazishintshi. Kusekhona engu-four cylinder kadizili. Eyokuqala yiV 200d enamandla angu-100kW netorque engu-330 Nm.
Enye yi-V 220d enamandla angu-120 kW ne-torque engu-380 Nm. Eyokugcina yi-V 250d enamandla angu-140 kW netorque engu-440 Nm nokuyiyo esiyishayelile ngesikhathi yethulwa ngeledlule.
Phesheya kukhona ne-V 300d efuqa u-176 kW/500 N.m kodwa ngebhadi ayilethwanga kuleli.
I-V 200 bathi kuyithatha imizuzwana engu-9.1 ukusuka ku-0 iye ku-100km. Yinto eyibhonasi le ukuthi iyashesha (kodwa hhayi njengeViano V6) kodwa okubalulekile kimi ukuthi intofontofo ngaphakathi futhi ithule.
Ingaphakathi leMercedes-Benz V-Class entsha nedlisa ngesikhumba nobuxhakaxhaka obusezingeni eliphezulu bokwenza impilo ibe lula kohamba ngayo
Lokhu kuyenza kube yimoto ekahle yokuthatha uhambo njengomndeni noma ukuthutha izicukuthwane.
Abagibeli bahlala kahle njengoba ubude bayo bungu-5.14 m futhi kuya ngawe uma uyithenga ukuthi ilayishe abangaki baze bafinyelele kwabayisishiyagalombili.
Uthi uma uphakathi ubone isibhakabhaka ngenxa ye-panoramic sunroof futhi kukhona netafula eligoqekayo phakathi nendawo ukuze ubeke okuthandayo.
Emgwaqweni inamandla enele futhi u-gearbox wayo ozishintshayo ushintsha kahle. Noma uyishayela awuzwa ukuthi yimoto enkulu futhi nokuyipaka akuwona umsebenzi kwazise inekhamera.
Ngaphandle kwayo ezinye izinto ezisiza umshayeli ezikhona ukuhti ibike uma izoshayisa futhi ilekelele ukubhreka. Amalambu futhi ngaphambili ayakwazi ukudima uma kuqhamuka enye imoto ukuze umshayeli angaxhopheki iphinde ikhanye kakhulu uma engasekho.
Uma uneV-Class “endala” angisiboni isidingo sokuyishintsha ufune ukuthatha le ngoba awukho umehluko otheni njengoba ngishilo.
Kubathengi abasha kodwa iyaheha futhi isazoqhubeka nokuthengwa ngoba yenza imindeni ihambe ngokunethezeka.
V200 d R 913 951.00
V220 d R 955 518.00
V250 d R 1 027 686.00
V220 d Avantgarde R 1 247 819.00
V250 d Avantgarde R 1 292 474.00
Ifika ne-maintenance plan yeminyaka eyisithupha noma * -100 000km okwesikhashana kodwa iba ngeyeminyaka emihlanu noma * -100 000km.